GreenKhabar – हत्केला चिलाउँदा पैसा होइन, यी समस्या आउँछन् !
हत्केला चिलाउँदा पैसा होइन, यी समस्या आउँछन् !
in मूलपेज / स्वास्थ्य — by GreenKhabar —	March 26, 2017
हत्केला चिलाउने समस्याबाट मुक्ति पाउन सबैभन्दा पहिला त हात चिलाउनुको कारण बुझ्नु पर्छ । हत्केला चिलाउनुका विभिन्न कारण हुन्छन् । जाडो याममा हुने सुख्खा छाला वा बेस्सरी हात घोटेर धुँदा पनि चिलाउने भएकोले ढुंगा वा जालीले हत्केला रगेड्नु हुँदैन स्वास्थ्य खबरपत्रिका